क्रिकेटर ललित भण्डारीलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याइयो ! « MNTVONLINE.COM
क्रिकेटर ललित भण्डारीलाई थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याइयो !
काठमाडौँ । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर घाइते भएका क्रिकेटर ललित भण्डारीलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । उनको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भएकोमा थप उपचारका लागि सोमबार काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पतालमा हेलिकोप्टरमार्फत ल्याइएको हो ।
दुर्घटनामा परि ललितको दायाँ हात, खुट्टा, टाउको र छातीमा चोट लागेको थियो । हातको कुम, एंकल लगायतका भागहरुमा चोट लागेको छ । उनको खुट्टा र हातको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले उपचारमा संलग्न हुने सम्पूर्ण चिकित्सक एवंम मेडिकल टिमलाई उपचारमा सक्रिय भएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । चन्दले श्रीघ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै संघको तर्फबाट समन्वय र सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेका छन् ।
उनले चलाएको मोटरसाइकललाई मिनिट्रकले ठक्कर दिँदा भण्डारीसहित दुई जना घाइते भएका थिए । आइतबार बेलुकी ७ बजे शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारी बजारमा दुर्घटना भएको थियो । लकडाउनपछि खेल गतिविधि बन्द भएकाले भण्डारी कञ्चनपुर घर गएका थिए ।